10 Fairytale lapa In Italia Ianao Visit | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Fairytale lapa In Italia Ianao Visit
(Last Nohavaozina: 01/10/2021)
Misy be dia be ny Fairytale lapa any Italia tsy maintsy hitsidika! Miaraka lava be toy izany, manan-karena tantara sy ny kolontsaina, ity firenena ity no toerana mba handeha ho trandrahana lapa. Mba hanampiana anao drafitra ny diany, eto dia 10 Fairytale lapa any Italia fa dia azo antoka fa handeha ho tia:
Raha toa ianao ka te hahalala ny momba ny toerana nahaterahan'i ny tavoahangy divay, Ao no toerana tokony halehany. Io lapa fananan'ny sprawls over 3,000 hektara, feno amin'ny tanim-boaloboka sy sahan'oliva. koa, dia tena tsara tarehy ny mahita nandritra ny masoandro mody fitetezam-paritra.
Bari ho Fasano Lamasinina
Taranto ho Fasano Lamasinina
Ny havoana tsara tarehy ny Tuscany fanafina izany maso-misambotra lapan'ny amin'ny tsy manam-paharoa trano. Ny tompony tamin'ny taonjato faha-19 dia te-hamolavola azy io amin'ny fitaomana atsinanana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, dia nifidy ny flair fa tsy misy hafa afaka italiana lapa mitovy.
Salerno ny Paestum Lamasinina
Naples ny Paestum Lamasinina
Mitady zavatra somary hafa? Dia lapa, dia afaka mankafy ny miala voly fotsiny getaway fa tsy ny hatsaran 'ny trano sy ny manodidina azy. Koa satria ny 1700s, lapa io, nijoro mpiambina eo amin'ny nanakodia ny faritra havoana, ary ankehitriny Hotel maro misy ao.
Naorina-in ny faha-10 tamin'ny taonjato, Valenzano lapa dia iray amin'ireo lapa Fairytale tranainy indrindra mbola mijoro any Italia. Ankehitriny dia mbola toy ny Mampitolagaga sady malaza tahaka ny avy eo. Na izany aza, fa tsy naha-toby, io lapa izao ny trano fandraisam-bahiny, tanteraka tamin'i kianja filalaovana tenisy ary taranja golf.
Fairytale tantara io lapa nanomboka ny arivo taona mahery lasa izay, ary ny fananana efa nifanakalo tanana eto mpandresy imbetsaka hatramin'ny. Na izany aza, dia toerana milamina amin'izao fotoana izao, amin'ny fambolena maro fananana sy ny tanim-boaloboka. Mpitsidika tia azy noho ny tantara mahavariana sy mahafinaritra trano.
Misy angano mahaliana mikasika ny iray amin'ireo tilikambo. Toy ny hoe mponina, dia ny fialan-tsasatra ny iray amin'ireo tompony taloha. voalaza, dia nampiasaina mba manidy ny nitsidika ny olona amin'izany tilikambo, izay nahatezitra ny olona. Na izany aza, ny angano Tsy ny zavatra ihany no nahasarika mpitsidika. tsara tarehy hevitra ny lohasaha manodidina ny lapa manao ilay dia mendrika izany.
Milan ho Genoa Lamasinina
Roma ho Genoa Lamasinina
Florence ho Genoa Lamasinina
Venice ny Genoa Lamasinina
Madio mangalahala io lapa mitady manaitra manome fomba fijery tena tsara sy fahafahana hianatra ny maritrano ny Renaissance fe-potoana. koa, iray hafa dia iray amin'ireo arivo taona lapa ankizy eo italiana. Fairytale lapa io dia akaiky an'i Florence, ary izany no ho andro lehibe lavitra avy any.
Pompei ny Paestum Lamasinina
Fahefana Paestum Lamasinina
Castle Cabbiavoli mba ho tonga lafatra sary iray Tuscan lapa. Miaraka amin'ny tsara tarehy tarehy, saha, tanim-boaloboka, ary ny sahan'oliva, ity dia manana lapa fotsiny izany rehetra izany. Azonao atao mihitsy aza mandeha mitaingina soavaly rehefa mitsidika any!
9. Mug Castle
Ny iray amin'ireo lapa manaitra indrindra nanerana an'i Italia dia mihantona ny precariously amin'ny cliffside. Ny onjan-Ranomasina Mediterane aina ny vatolampy, ary izany dia noho izy ireo lapa looms. Tsy ho afaka hitsidika ny anatiny, fa ny lapa dia mbola mety tsara ho an'ny sary.
Torre Del Mampiofana ny Grika ny Pompéi
Pompéi ho Nocera Lower Lamasinina
Fiaran-dalamby ho Salerno Nocera Inferiore
Fiaran-dalamby ho Salerno Mercato San Severino
Fa ny zavakanto tia amin'ny mpitety tany, Montegufoni ho mahavariana toerana halehany. Izany dia ny an-trano ny malaza Room ny saron-tava, misy Gino Severini's sary hoso-doko tsara tarehy. koa, dia toa tena manaitra, ary izany dia toerana fa ny olona rehetra dia afaka mahazo.
Salerno ny Maratea Lamasinina
Bari ho Maratea Lamasinina
Naples ho Maratea Lamasinina
Power Lamasinina ho Maratea
Vonona ny mahita ny Fairytale lapa tany Italia? Ataovy azo antoka ny hanaovana drafitra ny fialan-tsasatra sy ny Boky Ny Fiaran-Dalamby Tapakila ara-potoana!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Fairytale lapa In Italia Ianao Visit” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra fa azafady, fotsiny hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-castles-italy%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#angano #traveleurope trano fiarovana europetravel italyvacation fiaran-dalamby Travel torohevitra travelitaly
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Nandeha lamasinina Luxembourg, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
Inona ny mahita In Provence France